“WEDNESDAY MORNING GROUP” : Fahombiazana ny hetsika Bazar de Noel hanampiana ireo mpiara-belona
Tontosa tamin’ny faran’ny herinandro lasa teo ny andiany faha56 tamin’ny hetsika “Bazar de Noel” izay nokarakarain’ny “Wednesday Morning Group” na WMG. 25 novembre 2019
Teo ambany fiahian’ny vadin’ny Filoham-pirenena, Ramatoa Mialy Rajoelina moa ity hetsika ity ary natao hanampiana sy hanasoavana ny mpiara-belona amin’ny alalan’ny fanaovana asa sosialy. Niavaka tanteraka ity andiany faha56 ity satria niroborobo sy nomena sehatra nandritra ny hetsika ny asa tanana vita malagasy. Ankoatra ireo teto an-toerana anefa dia nomena sehatra sy nandray anjara tamin’ny hetsika koa ny orinasa avy any ivelany.
Araka ny fanazavana, entina hanaovana asa sosialy ny vola azo mandritra ny hetsika ka fananganana sekoly any Betsizaraina no hatao. Tsy hionona fotsiny amin’ny fanolorana sekoly nefa ny WMG fa hamatsy fitaovana ny mpianatra handrato fianarana amin’izany sekoly izany koa hanamaivanana ny vesatry ny ray aman-dreny.
Teny filamatra noraisina nandritra izao WMG izao rahateo ny hoe : “Fitiavana sy fifampizarana.” Tsiahivina fa mifantoka amin’ny sehatra telo lehibe ny asan’ny WMG, tafiditra ao anatin’izany ny fanatsarana ny fahasalamam-bahoaka, fampiroboroboana ny fanabeazana ary ny fiarovana ny tontolo iainana.